उपनिर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले माग्यो ४० करोड
भदौ ३, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १४ गतेका लागि तोकेको उपनिर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारसँग ४० करोड रुपैयाँ निकासाको प्रस्ताव गरेको छ । करीब ६ हजार ८०० जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको उक्त निर्वाचनका लागि आयोगले ४० करोड रुपैयाँ रकम प्रस्ताव गरी निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्रच...
भदौ ३, काठमाडौं । मनसुनको न्यून चापीय रेखा औसत स्थानमा रहेकाले सोको प्रभावबाट देशका अधिकांश स्थानमा मनसुनी वर्षा भइरहेको छ । हाल देशका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बताएको छ । महाशाखा...
१ महीनामा ११२ जनाले लिए अपाङ्गता परिचयपत्र
भदौ ३, ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाबाट एक महीनामा ११२ अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अपाङ्गता परिचयपत्र लिएका छन् । महानगरपालिकाले सो योजना अघि बढाएको एक महीना अवधिभरमा ५२ महिला र ६० पुरुषले सो परिचयपत्र लिएका हुन् । गत असार २५ गतेदेखि सो योजना अघि बढाइएको महानगरपालिकाको महिला विकास शाखा प्रमुख...
फूलको निर्यात घट्दो : करोडबाट झरेर लाखमा
काठमाडौं । आन्तरिक बजारमा बढेको मागका साथै नयाँ प्रविधिमा स्तरोन्नति गर्न नसक्दा फूलको विदेश निर्यात ठूलो मात्रामा घटेको छ । यो क्रमले ३ वर्षयता फूल तथा यस वर्गका वस्तुको निर्यातबाट हुने आम्दानीमा समेत निकै कमी ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा नेपालले रू. २६ लाख ८५ हजारको फूल तथा वि...
गत आवमा जीवन बीमा कारोबार : बीमाशुल्क बापत ७० अर्ब २१ करोड संकलन
काठमाडौं । निजीक्षेत्रका १८ जीवन बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ मा बीमाशुल्क बापत ७० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । उक्त कारोबारबाट उनीहरूले ३ अर्ब ६ करोड ३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । कम्पनीको बीमांकीय मूल्यांकनपछि खुद नाफा अरू बढ्नेछ । अघिल्लो आव (२०७४/७५) मा उनीहरूल...
राजस्व अनुसन्धान विभाग : प्रधानमन्त्री मातहत नराख्न कांग्रेसको माग
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नराख्न नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै अर्थ समितिमा रहेका कांग्रेसका सांसदले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकम...
रत्ननाथ मठको जग्गामा मोहियानी हकदाबी कायम नहुने
काठमाडौं । दाङ जिल्लास्थित गोरक्ष पात्रदेव सिद्ध रत्ननाथ मठको नाममा रहेको २—१९—१२ क्षेत्रफल भएको जग्गामा कसैको पनि मोहियानी हक दाबी पुग्न नसक्ने भनी सोमवार सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलाशले सो जग्गामा आफू...
आयुर्वेद तथा जडीबुटीको पाठ्यक्रम तयार
काठमाडौं । योग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद र जडीबुडीका विषयमा पाठ्यक्रम तयार भएको छ । योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद तथा जडीबुटी कार्यक्रमको आवश्यकता पहिचान, पाठ्यक्रम निर्माण परिमार्जन तथा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा सुझाव दिन सरकारद्वारा गठित समितिले पाठ्यक्रम तयार पारेको हो ।...
नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । प्राधिकरणले तोकेको म्यादमा बक्यौता नतिरेपछि व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको स्वामित्व रहेको नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज भएको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ को उपदफा ३ अनुसार तोकिएको समयमा बक्यौता नबुझा...
नेपालको साख निर्धारण तयारी : रेटिङ प्रक्रिया अघि बढाउन राजस्व सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन
काठमाडौं । देशको ‘रेटिङ’ नभएकाले विदेशी लगानी भित्र्याउन नसकिएको गुनासो उठिरहेका बेला सरकारले देशको साख निर्धारण अर्थात् ‘सोभरेन रेटिङ’को प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत साता अर्थ मन्त्रालयले राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘रेटिङ ओभरसाइट कमिटी’ गठन गरे...